April 5, 2017 in Oromia
DUBBII HAALAAN KAN HIN BEEKNEE, ITTI HIMANUU HIN GALUUF !!!! SEENAA Y.G(2005) kutaa 1ffaa Waggoota 150 oliif Gabrummaa jala jirra. Bilisummaan jiraachuu irra, Gabrummaa jalatti waa hedduu baratan. Warri Gabrummaa jala turanii fi jiran, hadhaa gabrummaa tokkummaan hadheeffatanii, mi’aa Bilisummaa waliin dhandhamaa jiran. Nuuti garuu hadhaa Gabrummaa kana wal qixa hadheeffachaa hin jirru. Kanaaf bakka sagal […]
Aadan waan dansaa dansomaa ufii abbaatuu afaan miyeefataa dhiroo diqoolee tatuu mee dhagefadhaa Artistootaa dubraa
Kutaa 1 Aadan waan dansaa dansomaa ufii abbaatuu afaan miyeefataa dhiroo diqoolee tatuu mee dhagefadhaa Artistootaa dubraa teen taan . ● waachile Godana ● lokho Galgalo ● Elema jattanii horaa bulaa debaanaa Aadaa keessatii bula